မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး ၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရ - Tha Dinn Oo
မိုးနတ်မင်းကြီးရဲ့ သမီးလေး ၄ တန်းကျောင်းသူဘဝကထဲက စင်ကာပူမှာကျောင်းဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အမေရိကန်တက္ကသိုလ်မှာပါ ဆက်တက်ခွင့်ရ
ဒီလောက်စွမ်းရည်ရှိတဲ့ မြန်မာသမီးငယ်လေး တစ်ယောက်ကိုတွေ့ရ သိရတာ နိုင်ငံအတွက် အားရှိလိုက်တာ။
ဒီလိုစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သားငယ် သမီးငယ်တွေ အများကြီးပေါ်ထွန်းပါစေ…
အဲဒီစွမ်းရည်ရှိတဲ့ သမီးငယ်လေးနံမည်က “စွမ်းရည်“တဲ့
မြန်မာပြည်က ၄ တန်းကျောင်းသူ “စွမ်း”…. စင်္ကာပူကို မိခင်နဲ့အတူ လာလည်ရင်း …. ခဏတည်းတဲ့အိမ်က အိမ်ရှင်ကလေးလေးတွေနေတဲ့ ရပ်ကွက်ထဲက အစိုးရကျောင်းမှာ primary(4) ( Grade 4) အတွက် ဝင်ခွင့်စာမေးဝင်ဖြေကြည့်ရာ
သူ့အဖြေတွေကို အဲဒီကျောင်းက သဘောကျပြီး တစ်တန်းကျော်ကာ primary (5) မှာ ဝင်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက် …စင်္ကာပူမှာ ကျောင်းနေဖြစ်သွားသတဲ့။
သူများတိုင်းပြည်မှာ သမီးငယ်လေးကျောင်းတက်မှာမို့ မိခင်မှာ ကျန်တဲ့သားငယ်သမီးငယ် ခင်ပွန်းတို့ကိုထားခဲ့ပြီး သမီးကို လိုက်စောင့်ရှောက်ရသတဲ့။ စွမ်း လေးက အားနာပြီး အမေ..ရန်ကုန် အဖေ့ဆီပြန်ပါ
သမီးကို အမေ့မိတ်ဆွေအိမ် တစ်အိမ်အိမ်မှာသာထားခဲ့။ သမီးနေတတ်ပါတယ်။ ပညာရေးအတွက် သမီးဖြစ်အောင်နေမယ်လို့ အမေကိုပြတ်ပြတ်သားသားပြောသတဲ့။ တစ်ကယ်လည်း “စွမ်း”လေးဟာ လိမ္မာပြီးနေတတ်တော့ နေလေရာမှာ အဆင်ပြေသတဲ့။
“စွမ်း” လေးက သိပ်ဇွဲရှိပြီး လုပ်သင့်တာကိုသိ၊ သိတဲ့အတိုင်းလည်းလုပ်နိုင်တဲ့ ကလေး။ “စွမ်း”ငယ်ငယ်က သိပ်“၀”တာ။ “၀”တာမှ ကစ်နေပြီး လက်ကောက်ဝတ်လေးတွေတောင် မမြင်ရဘူးတဲ့။ စင်္ကာပူကျောင်းတွေက obesity ပြဿနာကို အလေးထား ပညာပေး ပရိုဂရမ်တွေတစ်စိုက်မတ်မတ်လုပ်တာက တစ်ကြောင်း၊ ဆယ်ကျော်သက်နီးပါးသမီးငယ်ရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် peer pressure ကြောင့်တစ်ကြောင်း ဖြစ်မယ်ထင်တယ်….
“စွမ်း” ဝိတ်လျှော့တော့တာဘဲ။ မစားသင့်တဲ့ အစာကို မစားသင့်တဲ့အချိန်မှာ မစားသင့်သလောက် မစားကိုမစားဘူး။ ခြောက်လွှာမှာရှိတဲ့ အိမ်ခန်းကိုပြန်ရင်လည်း လှေကားနဲ့ဘဲ တက်တယ်…ဆင်းတယ်။ တစ်နှစ်အတွင်း “စွမ်း”ပိန်သွားတာ…. အခုဆိုရင် ၂၀ ကျော်သက် “စွမ်း” က … အရမ်းလှ ။
“စွမ်း“ လိမ္မာကြောင်း၊ ဇွဲရှိကြောင်း၊ ဉာဏ်ရှိကြောင်းပြောပြတာပါ။ Physically အောင်မြင်တာတွင်မက… Academically လည်းအောင်မြင် လိုက်သမှ…..PSLE အောင်တော့… စလုံးတွေတောင် အိပ်မက်မက်ယူရတဲ့ Raffle Girls’ School (RGS) ကို ဝင်ခွင့်ရသတဲ့။
စင်္ကာပူမှာတောင် လူ့မလိုင်တွေမှ ဝင်နိုင်တဲ့ကျောင်း။ “စွမ်း” RGS ဝင်ခွင့်ရသွားတော့ စွမ်းနေခဲ့တဲ့ neighbourhood Primary School က ဂုဏ်ယူလို့မဆုံးဘူးတဲ့။
RGS မှာ year (4) ပြီးတော့ စင်္ကာပူရဲ့ The most prestige Junior College ဖြစ်တဲ့ Raffles Institution မှာတက်နေရင်း… ရှေးရိုးဆန်နေတာလေးတွေ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ Singapore Education System က ရုန်းထွက်ချင်လာတယ်။
အတန်းဖော် လူ့မလိုင်လေးတွေဟာ အမှတ်တွေကောင်းဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ကြိုးစားကြရင်း University ကောင်းကောင်းတွေဝင်ဖို့သာ အာရုံစိုက်ကာ စာသင်ခန်းအပြင်ဘက်က လောကကြီးကိုမေ့နေကြတယ်၊ စာအုပ်ထဲက ပညာတွေကို apply လုပ်ဖို့ သတိမရကြဘူး။
“စွမ်း” ကတော့ out of the box ကို ကြည့်ချင် မြင်ချင် တွေးချင်တာ ကြောင့် prestige RI ကိုစွန့်လွှတ်ပြီး အမေရိကားက University တွေကို ဝင်ခွင့်လှမ်းလျှောက်တာ တက်ခွင့်ရသွားတယ်။
ဘယ် University လဲ သိလား………. “ University of California Berkeley”……. OMG!
ဘယ် ဘာသာယူလဲ သိလား….. “Landscape Architecture”……. Interesting ! “စွမ်း” ကိုယ်တိုင်က artist လေ… ပန်းချီလည်းဆွဲတယ်။
“UC Berkeley” က ဘွဲ့ ရပြီးတော့ ဘယ်လို ဘဝခရီးဆက်လဲ သိလား….. မြန်မာပြည်ပြန်လာတယ်။ ဘာလုပ်လဲသိလား….. “ဒို့အိမ်” Project လုပ်နေတယ်။
နယ်သာလင်နိုင်ငံဖွား UC Berkeley ဘွဲ့ရ တဦးက ပန်းချီလည်း ဆွဲတတ်တဲ့.. Lanscape architect လည်းဖြစ်တဲ့… “စွမ်း”ရဲ့ “စွမ်းရည်” ကို တွေ့ရှိပြီး … “ဒို့အိမ်”placemaking project တွေမှာလက်တွဲလုပ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်။
“ဒို့အိမ်” Alley Garden Project ဆိုတာ ရန်ကုန်မှာ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေကို ရှင်းလင်းသုတ်သင်ပြီး လှပအောင် တိုက်နံရံတွေမှာလည်း ပန်းချီဆွဲတယ်… စသည်ဖြင့် heritage conservation and urban renewal နဲ့တွဲလုပ်နေတာလေ။ “စွမ်း”နဲ့တော့ အကိုက်ဘဲ။ အောင်မြင်တဲ့ လမ်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။
မအောင်မြင်တဲ့လမ်းလေးတွေလည်းရှိတယ်။ ရှင်းပြီးသားလမ်းလေးတွေကို မထိန်းသိမ်းရင် ပြန်ရှုပ်ပြီး မအောင်မြင်တော့ဘူးပေါ့။
အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ရှင်းထားတာလေးတွေ ရေရှည်တည်တံံ့ဖို့ (sustainability) အတွက် အိမ်ရှင် (residents) တွေကိုပါ ပါဝင်လှုပ်ရှားခိုင်းပြီး တာဝန်ယူခိုင်းကြတယ်။ ဒါမှ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း အောင်မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်လား။ ကိုယ့်လမ်းကို ကိုယ်ပါဝင်ထိန်းသိမ်းမှ သာယာတဲ့လမ်းလေးဟာ တည်မြဲသလို .. ကိုယ့်တိုင်းပြည် ကိုယ်ပါဝင်ထိန်းသိမ်းမှသာယာတဲ့တိုင်းပြည် တည်မြဲမှာ မဟုတ်ပါလား။
လူ့ အဖိုးတန် သမီးလေးပါ…
“စွမ်း” ရဲ့ စွမ်းရည်က ဒီမှာ မရပ်သေးဘူး။ Master ဘွဲ့ ဆက်တက်ဦးမယ်။ B.A ဘွဲ့နဲ့ ဒီလောက်ဘဲ တိုင်းပြည်ကို အကျိုးပြုလို့ရမယ်…. M.Aဘွဲ့နဲ့ဆိုရင် ဟိုလောက်ကြီး အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်နိုင်မယ်ယုံကြည်လို့တဲ့။ ကဲ… ကြည့်စမ်း …. ဘယ်လောက် စွမ်းရည်ရှိသလဲလို့။
ဒီ အကြောင်းကို ပြောပြတာ ဘယ်သူလဲသိလား…ဟိုတစ်ခါ အောက်စဖို့ဒ်ဆရာတော်ဟောလိုက်တဲ့ ရောဂါနဲ့ ကံ၊ စိတ်၊ ဥတု၊ အဟာရ တရားပြောပြတဲ့ မကြီးကြူပေါ့။ မကြီးကြူလာလည်တော့ ကော်ဖီသောက်ရင်းပြောဖြစ်ကြတာ။
“စွမ်း” က သူ့တူမလေးပါတဲ့။ သူ့အမ မမူနဲ့ အန်ကယ် ဦးထွန်းလွင်တို့ရဲ့ သမီးပါတဲ့။ ဟင်… ဘယ်လို… ဘယ်လို… !!!
မကြီးကြူ အမ မမူက မိုးလေဝသနဲ့ ဇလဗေဒပညာရှင် .. ဟို နံမည်ကြီးတဲ့ ဦးထွန်းလွင်ကြီးနဲ့က ဇနီးမောင်နှံ.. ဟုတ်လား ??
မကြီးကြူကလည်း.. တစ်ခါမှ မပြောပြဖူးဘူးတော့…ဒါဆိုရင် “စွမ်း” က အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီးပေါ့။
ဟုတ်ပါတယ်ရှင်… အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ရဲ့ သမီး “စွမ်းရည်ထွန်းလွင်” ပါတဲ့….
သမီးက ဒီလောက်တော်တာ… အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ကြီးက မကြားဘူးလားဟယ်….
အန်ကယ်ရေ… အန်ကယ့်သမီး “စွမ်း” ဘယ်လောက် “စွမ်းရည်” ရှိကြောင်း တလောကလုံးကို ကြွားလိုက်စမ်းပါ..အန်ကယ်ရာ….
“စွမ်း” တိုင်းပြည်အကျိုးပြု ရည်ရွယ်ချက်တွေ အောင်မြင်ပါစေ….. “စွမ်း”လို “စွမ်းရည်”ရှိတဲ့ လူငယ်များစွာပေါ်ပေါက်ပါစေ….အနာဂတ်မှာ “စွမ်းရည်”ရှိတဲ့ နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်ပါစေ….
အကြောင်းအကျိုးတွေ တိုက်ဆိုင်တော့ “စွမ်း”နဲ့ စကားပြောခွင့်ရခဲ့တယ်။ “စွမ်း” က RGS 140 homecoming memorable event လာတက်တာလေ။
“စွမ်း” ကိုမေးကြည့်တယ်…..ဘာလို့ Lanscape Architecture ကိုမှ စိတ်ဝင်စားတာလဲလို့။
“စွမ်း” က ပထဝီ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေနဲ့ ပတ်သက်တာတွေမှန်သမျှှ အကုန်စိတ်ဝင်စားတယ်တဲ့။
“စွမ်း” RGS ကျောင်းပိတ်ချိန်တွေ မြန်မာပြည်ပြန်တဲ့အခါ.. အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင် education talk ပေးရာမြို့တွေ တောရွာတွေကိုလိုက်သွားတယ်။ နေပူတယ်၊ မိုးရွာတယ် စသည်ဖြင့် စာအုပ်ထဲမှာ သင်ရတဲ့ ရာသီဥတုတွေဟာ စပါးရိတ်သိမ်းမည့် လယ်သမားကြီးတွေ၊ ပြောင်းစိုက်မည့်ယာသမားကြီးတွေရဲ့ ဘဝကို ဘယ်လောက်တောင်ထိခိုက်တယ်၊ ဘယ်လောက်တောင် အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာတွေ
တွေ့ရ မြင်ရ သိလာရတော့…. “ဟင်…the world is so big. Real life is much bigger than the book”လို့ စာအုပ်လောက ကလေးကနေ ထွက်ပြီး တကယ့်လက်တွေ့လောကကြီးကို မြင်လာတယ်။ It striked her !!
အဖေ့ gene အဖေ့ interest အဖေ့ပညာတွေရဲ့ influence ပေါ့။ အခုထိလည်း အဖေလိုချင်တဲ့ data တွေ၊ facts တွေကို “စွမ်း” က ရှာပေးနေတာတဲ့။ အန်ကယ့်မှာ လိုအပ်တဲ့ computer ပိုင်းမှန်သမျှှကို ကူညီပေးနေတဲ့ software engineer သားတစ်ယောက်လည်း ရှိသေးတယ်တဲ့။ အိုး… ဒါကြောင့် အန်ကယ်ဦးထွန်းလွင်ကြီး ဒီနေ့အထိ UptoDate ဖြစ်နေတာကိုး….cool !
“စွမ်း”ဟာ သူတတ်တဲ့ Landscape Architecture က very nice area မို့ … ဘွဲ့လွန်အတွေ့အကြုံတွေ လေ့လာတိုးတက်ဖို့အတွက် မြန်မာပြည်နဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆင်တူတဲ့ အာရှနိုင်ငံတစ်ခုခုမှာ (ဒီတစ်ခါတော့ အမေရိကား မသွားတော့ဘဲ) ဘွဲ့လွန်တက်ရင်း ၊ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံတွေလည်းယူရင်း ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ တိုးတက်လာပြီးမှ အိမ်ပြန်လာတော့မယ်တဲ့။
“စွမ်း” ရဲ့ အရည်အချင်း နောက်တစ်ခုက .. မြန်မာစာ မြန်မာစကားကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်ပြီး မြန်မာယဉ်ကျေးမှုကို မြတ်မြတ်နိုးနိုးနားလည်တာပါဘဲ။
“စွမ်း” အမေရဲ့ တစိုက်မတ်မတ် မြန်မာစာသင်ပေးတာ.. သံရုံးမှာမြန်မာစာမေးပွဲတွေဖြေခိုင်းတာ၊ အိမ်မှာမြန်မာလိုဘဲပြောတာတွေကြောင့်ပေါ့။ တော်ပါပေ့ မမူရယ်။ UC Berkeley မြန်မာစာသင်တန်းမှာတောင် “စွမ်း” ဝိုင်းကူခဲ့သေးတယ်တဲ့။
တကယ်တော့ “စွမ်း” လို လူငယ်လေးတွေဟာ “မြန်မာ” ကို “ကမ္ဘာ”နဲ့ ဆက်သွယ်ပေးနေမည့် ပေါင်းကူးတံတားလေးတွေပါ…“စွမ်း” စွမ်းရည်တွေ မြင့်သည်ထက်မြင့်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံမှာ မြို့လှလှလေးတွေ အများကြီးတည်ဆောက်နိုင်ပါစေ…
“စွမ်း” အိပ်မက်လေးတွေ မဝေးတော့တဲ့ အနာဂတ်မှာအကောင်အထည်ပေါ်လာပါစေ…
အကြောင်းအကျိုးတိုက်ဆိုင်လို့ “စွမ်း”ကို သိရလို့ “စွမ်း”အကြောင်းရေးတာပါ။ “စွမ်း”လို အနာဂတ်အတွက် လူငယ်တွေ သူ့ကျွမ်းကျင်မှု သူ့ talent နဲ့သူ အများကြီးရှိကြတယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်…အားရွိပါတယ်…. အားတက္ပါတယ်…. အနာဂတ်အတွက်
ဒီေလာက္စြမ္းရည္ရွိတဲ့ ျမန္မာသမီးငယ္ေလး တစ္ေယာက္ကိုေတြ႕ရ သိရတာ ႏိုင္ငံအတြက္ အားရွိလိုက္တာ။
ဒီလိုစြမ္းရည္ရွိတဲ့ သားငယ္ သမီးငယ္ေတြ အမ်ားႀကီးေပၚထြန္းပါေစ…
အဲဒီစြမ္းရည္ရွိတဲ့ သမီးငယ္ေလးနံမည္က “စြမ္းရည္“တဲ့
ျမန္မာျပည္က ၄ တန္းေက်ာင္းသူ “စြမ္း”…. စကၤာပူကို မိခင္နဲ႔အတူ လာလည္ရင္း …. ခဏတည္းတဲ့အိမ္က အိမ္ရွင္ကေလးေလးေတြေနတဲ့ ရပ္ကြက္ထဲက အစိုးရေက်ာင္းမွာ primary(4) ( Grade 4) အတြက္ ဝင္ခြင့္စာေမးဝင္ေျဖၾကည့္ရာ
သူ႔အေျဖေတြကို အဲဒီေက်ာင္းက သေဘာက်ၿပီး တစ္တန္းေက်ာ္ကာ primary (5) မွာ ဝင္ခြင့္ေပးလိုက္တဲ့အတြက္ …စကၤာပူမွာ ေက်ာင္းေနျဖစ္သြားသတဲ့။
သူမ်ားတိုင္းျပည္မွာ သမီးငယ္ေလးေက်ာင္းတက္မွာမို႔ မိခင္မွာ က်န္တဲ့သားငယ္သမီးငယ္ ခင္ပြန္းတို႔ကိုထားခဲ့ၿပီး သမီးကို လိုက္ေစာင့္ေရွာက္ရသတဲ့။ စြမ္း ေလးက အားနာၿပီး အေမ..ရန္ကုန္ အေဖ့ဆီျပန္ပါ
သမီးကို အေမ့မိတ္ေဆြအိမ္ တစ္အိမ္အိမ္မွာသာထားခဲ့။ သမီးေနတတ္ပါတယ္။ ပညာေရးအတြက္ သမီးျဖစ္ေအာင္ေနမယ္လို႔ အေမကိုျပတ္ျပတ္သားသားေျပာသတဲ့။ တစ္ကယ္လည္း “စြမ္း”ေလးဟာ လိမၼာၿပီးေနတတ္ေတာ့ ေနေလရာမွာ အဆင္ေျပသတဲ့။
“စြမ္း” ေလးက သိပ္ဇြဲရွိၿပီး လုပ္သင့္တာကိုသိ၊ သိတဲ့အတိုင္းလည္းလုပ္ႏိုင္တဲ့ ကေလး။ “စြမ္း”ငယ္ငယ္က သိပ္“၀”တာ။ “၀”တာမွ ကစ္ေနၿပီး လက္ေကာက္ဝတ္ေလးေတြေတာင္ မျမင္ရဘူးတဲ့။ စကၤာပူေက်ာင္းေတြက obesity ျပႆနာကို အေလးထား ပညာေပး ပ႐ိုဂရမ္ေတြတစ္စိုက္မတ္မတ္လုပ္တာက တစ္ေၾကာင္း၊ ဆယ္ေက်ာ္သက္နီးပါးသမီးငယ္ရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္ peer pressure ေၾကာင့္တစ္ေၾကာင္း ျဖစ္မယ္ထင္တယ္….
“စြမ္း” ဝိတ္ေလွ်ာ့ေတာ့တာဘဲ။ မစားသင့္တဲ့ အစာကို မစားသင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ မစားသင့္သေလာက္ မစားကိုမစားဘူး။ ေျခာက္လႊာမွာရွိတဲ့ အိမ္ခန္းကိုျပန္ရင္လည္း ေလွကားနဲ႔ဘဲ တက္တယ္…ဆင္းတယ္။ တစ္ႏွစ္အတြင္း “စြမ္း”ပိန္သြားတာ…. အခုဆိုရင္ ၂၀ ေက်ာ္သက္ “စြမ္း” က … အရမ္းလွ ။
“စြမ္း“ လိမၼာေၾကာင္း၊ ဇြဲရွိေၾကာင္း၊ ဉာဏ္ရွိေၾကာင္းေျပာျပတာပါ။ Physically ေအာင္ျမင္တာတြင္မက… Academically လည္းေအာင္ျမင္ လိုက္သမွ…..PSLE ေအာင္ေတာ့… စလုံးေတြေတာင္ အိပ္မက္မက္ယူရတဲ့ Raffle Girls’ School (RGS) ကို ဝင္ခြင့္ရသတဲ့။
စကၤာပူမွာေတာင္ လူ႔မလိုင္ေတြမွ ဝင္ႏိုင္တဲ့ေက်ာင္း။ “စြမ္း” RGS ဝင္ခြင့္ရသြားေတာ့ စြမ္းေနခဲ့တဲ့ neighbourhood Primary School က ဂုဏ္ယူလို႔မဆုံးဘူးတဲ့။
RGS မွာ year (4) ၿပီးေတာ့ စကၤာပူရဲ႕ The most prestige Junior College ျဖစ္တဲ့ Raffles Institution မွာတက္ေနရင္း… ေရွး႐ိုးဆန္ေနတာေလးေတြ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ Singapore Education System က ႐ုန္းထြက္ခ်င္လာတယ္။
အတန္းေဖာ္ လူ႔မလိုင္ေလးေတြဟာ အမွတ္ေတြေကာင္းဖို႔ အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳးစားၾကရင္း University ေကာင္းေကာင္းေတြဝင္ဖို႔သာ အာ႐ုံစိုက္ကာ စာသင္ခန္းအျပင္ဘက္က ေလာကႀကီးကိုေမ့ေနၾကတယ္၊ စာအုပ္ထဲက ပညာေတြကို apply လုပ္ဖို႔ သတိမရၾကဘူး။
“စြမ္း” ကေတာ့ out of the box ကို ၾကည့္ခ်င္ ျမင္ခ်င္ ေတြးခ်င္တာ ေၾကာင့္ prestige RI ကိုစြန႔္လႊတ္ၿပီး အေမရိကားက University ေတြကို ဝင္ခြင့္လွမ္းေလွ်ာက္တာ တက္ခြင့္ရသြားတယ္။
ဘယ္ University လဲ သိလား………. “ University of California Berkeley”……. OMG!
ဘယ္ ဘာသာယူလဲ သိလား….. “Landscape Architecture”……. Interesting ! “စြမ္း” ကိုယ္တိုင္က artist ေလ… ပန္းခ်ီလည္းဆြဲတယ္။
“UC Berkeley” က ဘြဲ႕ ရၿပီးေတာ့ ဘယ္လို ဘဝခရီးဆက္လဲ သိလား….. ျမန္မာျပည္ျပန္လာတယ္။ ဘာလုပ္လဲသိလား….. “ဒို႔အိမ္” Project လုပ္ေနတယ္။
နယ္သာလင္ႏိုင္ငံဖြား UC Berkeley ဘြဲ႕ရ တဦးက ပန္းခ်ီလည္း ဆြဲတတ္တဲ့.. Lanscape architect လည္းျဖစ္တဲ့… “စြမ္း”ရဲ႕ “စြမ္းရည္” ကို ေတြ႕ရွိၿပီး … “ဒို႔အိမ္”placemaking project ေတြမွာလက္တြဲလုပ္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚခဲ့တယ္။
“ဒို႔အိမ္” Alley Garden Project ဆိုတာ ရန္ကုန္မွာ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြကို ရွင္းလင္းသုတ္သင္ၿပီး လွပေအာင္ တိုက္နံရံေတြမွာလည္း ပန္းခ်ီဆြဲတယ္… စသည္ျဖင့္ heritage conservation and urban renewal နဲ႔တြဲလုပ္ေနတာေလ။ “စြမ္း”နဲ႔ေတာ့ အကိုက္ဘဲ။ ေအာင္ျမင္တဲ့ လမ္းေလးေတြလည္းရွိတယ္။
မေအာင္ျမင္တဲ့လမ္းေလးေတြလည္းရွိတယ္။ ရွင္းၿပီးသားလမ္းေလးေတြကို မထိန္းသိမ္းရင္ ျပန္ရႈပ္ၿပီး မေအာင္ျမင္ေတာ့ဘူးေပါ့။
အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ရွင္းထားတာေလးေတြ ေရရွည္တည္တံံ့ဖို႔ (sustainability) အတြက္ အိမ္ရွင္ (residents) ေတြကိုပါ ပါဝင္လႈပ္ရွားခိုင္းၿပီး တာဝန္ယူခိုင္းၾကတယ္။ ဒါမွ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္မဟုတ္လား။ ကိုယ့္လမ္းကို ကိုယ္ပါဝင္ထိန္းသိမ္းမွ သာယာတဲ့လမ္းေလးဟာ တည္ၿမဲသလို .. ကိုယ့္တိုင္းျပည္ ကိုယ္ပါဝင္ထိန္းသိမ္းမွသာယာတဲ့တိုင္းျပည္ တည္ၿမဲမွာ မဟုတ္ပါလား။
လူ႔ အဖိုးတန္ သမီးေလးပါ…
“စြမ္း” ရဲ႕ စြမ္းရည္က ဒီမွာ မရပ္ေသးဘူး။ Master ဘြဲ႕ ဆက္တက္ဦးမယ္။ B.A ဘြဲ႕နဲ႔ ဒီေလာက္ဘဲ တိုင္းျပည္ကို အက်ိဳးျပဳလို႔ရမယ္…. M.Aဘြဲ႕နဲ႔ဆိုရင္ ဟိုေလာက္ႀကီး အက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ႏိုင္မယ္ယုံၾကည္လို႔တဲ့။ ကဲ… ၾကည့္စမ္း …. ဘယ္ေလာက္ စြမ္းရည္ရွိသလဲလို႔။
ဒီ အေၾကာင္းကို ေျပာျပတာ ဘယ္သူလဲသိလား…ဟိုတစ္ခါ ေအာက္စဖို႔ဒ္ဆရာေတာ္ေဟာလိုက္တဲ့ ေရာဂါနဲ႔ ကံ၊ စိတ္၊ ဥတု၊ အဟာရ တရားေျပာျပတဲ့ မႀကီးၾကဴေပါ့။ မႀကီးၾကဴလာလည္ေတာ့ ေကာ္ဖီေသာက္ရင္းေျပာျဖစ္ၾကတာ။
“စြမ္း” က သူ႔တူမေလးပါတဲ့။ သူ႔အမ မမူနဲ႔ အန္ကယ္ ဦးထြန္းလြင္တို႔ရဲ႕ သမီးပါတဲ့။ ဟင္… ဘယ္လို… ဘယ္လို… !!!
မႀကီးၾကဴ အမ မမူက မိုးေလဝသနဲ႔ ဇလေဗဒပညာရွင္ .. ဟို နံမည္ႀကီးတဲ့ ဦးထြန္းလြင္ႀကီးနဲ႔က ဇနီးေမာင္ႏွံ.. ဟုတ္လား ??
မႀကီးၾကဴကလည္း.. တစ္ခါမွ မေျပာျပဖူးဘူးေတာ့…ဒါဆိုရင္ “စြမ္း” က အန္ကယ္ဦးထြန္းလြင္ရဲ႕ သမီးေပါ့။
ဟုတ္ပါတယ္ရွင္… အန္ကယ္ဦးထြန္းလြင္ရဲ႕ သမီး “စြမ္းရည္ထြန္းလြင္” ပါတဲ့….
သမီးက ဒီေလာက္ေတာ္တာ… အန္ကယ္ဦးထြန္းလြင္ႀကီးက မၾကားဘူးလားဟယ္….
အန္ကယ္ေရ… အန္ကယ့္သမီး “စြမ္း” ဘယ္ေလာက္ “စြမ္းရည္” ရွိေၾကာင္း တေလာကလုံးကို ႂကြားလိုက္စမ္းပါ..အန္ကယ္ရာ….
“စြမ္း” တိုင္းျပည္အက်ိဳးျပဳ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ပါေစ….. “စြမ္း”လို “စြမ္းရည္”ရွိတဲ့ လူငယ္မ်ားစြာေပၚေပါက္ပါေစ….အနာဂတ္မွာ “စြမ္းရည္”ရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးျဖစ္ပါေစ….
အေၾကာင္းအက်ိဳးေတြ တိုက္ဆိုင္ေတာ့ “စြမ္း”နဲ႔ စကားေျပာခြင့္ရခဲ့တယ္။ “စြမ္း” က RGS 140 homecoming memorable event လာတက္တာေလ။
“စြမ္း” ကိုေမးၾကည့္တယ္…..ဘာလို႔ Lanscape Architecture ကိုမွ စိတ္ဝင္စားတာလဲလို႔။
“စြမ္း” က ပထဝီ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္တာေတြမွန္သမွ်ွ အကုန္စိတ္ဝင္စားတယ္တဲ့။
“စြမ္း” RGS ေက်ာင္းပိတ္ခ်ိန္ေတြ ျမန္မာျပည္ျပန္တဲ့အခါ.. အန္ကယ္ဦးထြန္းလြင္ education talk ေပးရာၿမိဳ႕ေတြ ေတာ႐ြာေတြကိုလိုက္သြားတယ္။ ေနပူတယ္၊ မိုး႐ြာတယ္ စသည္ျဖင့္ စာအုပ္ထဲမွာ သင္ရတဲ့ ရာသီဥတုေတြဟာ စပါးရိတ္သိမ္းမည့္ လယ္သမားႀကီးေတြ၊ ေျပာင္းစိုက္မည့္ယာသမားႀကီးေတြရဲ႕ ဘဝကို ဘယ္ေလာက္ေတာင္ထိခိုက္တယ္၊ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ အက်ိဳးေပးတယ္ဆိုတာေတြ
ေတြ႕ရ ျမင္ရ သိလာရေတာ့…. “ဟင္…the world is so big. Real life is much bigger than the book”လို႔ စာအုပ္ေလာက ကေလးကေန ထြက္ၿပီး တကယ့္လက္ေတြ႕ေလာကႀကီးကို ျမင္လာတယ္။ It striked her !!
အေဖ့ gene အေဖ့ interest အေဖ့ပညာေတြရဲ႕ influence ေပါ့။ အခုထိလည္း အေဖလိုခ်င္တဲ့ data ေတြ၊ facts ေတြကို “စြမ္း” က ရွာေပးေနတာတဲ့။ အန္ကယ့္မွာ လိုအပ္တဲ့ computer ပိုင္းမွန္သမွ်ွကို ကူညီေပးေနတဲ့ software engineer သားတစ္ေယာက္လည္း ရွိေသးတယ္တဲ့။ အိုး… ဒါေၾကာင့္ အန္ကယ္ဦးထြန္းလြင္ႀကီး ဒီေန႔အထိ UptoDate ျဖစ္ေနတာကိုး….cool !
“စြမ္း”ဟာ သူတတ္တဲ့ Landscape Architecture က very nice area မို႔ … ဘြဲ႕လြန္အေတြ႕အႀကဳံေတြ ေလ့လာတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ျမန္မာျပည္နဲ႔ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆင္တူတဲ့ အာရွႏိုင္ငံတစ္ခုခုမွာ (ဒီတစ္ခါေတာ့ အေမရိကား မသြားေတာ့ဘဲ) ဘြဲ႕လြန္တက္ရင္း ၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံေတြလည္းယူရင္း ကိုယ့္အရည္အခ်င္းေတြ တိုးတက္လာၿပီးမွ အိမ္ျပန္လာေတာ့မယ္တဲ့။
“စြမ္း” ရဲ႕ အရည္အခ်င္း ေနာက္တစ္ခုက .. ျမန္မာစာ ျမန္မာစကားကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္တတ္ေျမာက္ၿပီး ျမန္မာယဥ္ေက်းမႈကို ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုးနားလည္တာပါဘဲ။
“စြမ္း” အေမရဲ႕ တစိုက္မတ္မတ္ ျမန္မာစာသင္ေပးတာ.. သံ႐ုံးမွာျမန္မာစာေမးပြဲေတြေျဖခိုင္းတာ၊ အိမ္မွာျမန္မာလိုဘဲေျပာတာေတြေၾကာင့္ေပါ့။ ေတာ္ပါေပ့ မမူရယ္။ UC Berkeley ျမန္မာစာသင္တန္းမွာေတာင္ “စြမ္း” ဝိုင္းကူခဲ့ေသးတယ္တဲ့။
တကယ္ေတာ့ “စြမ္း” လို လူငယ္ေလးေတြဟာ “ျမန္မာ” ကို “ကမာၻ”နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးေနမည့္ ေပါင္းကူးတံတားေလးေတြပါ…“စြမ္း” စြမ္းရည္ေတြ ျမင့္သည္ထက္ျမင့္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿမိဳ႕လွလွေလးေတြ အမ်ားႀကီးတည္ေဆာက္ႏိုင္ပါေစ…
“စြမ္း” အိပ္မက္ေလးေတြ မေဝးေတာ့တဲ့ အနာဂတ္မွာအေကာင္အထည္ေပၚလာပါေစ…
အေၾကာင္းအက်ိဳးတိုက္ဆိုင္လို႔ “စြမ္း”ကို သိရလို႔ “စြမ္း”အေၾကာင္းေရးတာပါ။ “စြမ္း”လို အနာဂတ္အတြက္ လူငယ္ေတြ သူ႔ကြၽမ္းက်င္မႈ သူ႔ talent နဲ႔သူ အမ်ားႀကီးရွိၾကတယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္…အား႐ြိပါတယ္…. အားတကၸါတယ္…. အနာဂတ္အတြက္
အျပင္မွာျဖစ္ေနတာနဲ႔ တလြဲစီပါပဲ။မင္းရာဇာဟာ ဒီေန႔ ႐ုံးခ်ိန္းကို တက္ေရာက္လာရင္း မတရားမႈေတြ ၾကားမွာ စိတ္ဓာတ္ေတြလည္း က်ေနမိတယ္လို႔ ေျပာလာပါတယ္။ အိမ္အကူ မိန္းကေလးအား ညႇင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ မုဒိန္းမႈေတြေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုခံထားရတဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ မင္းရာဇာကို ဒီေန႔ ဇူလိုင္(၁၃) ရက္က ေျမာက္ဥကၠလာ တရား႐ုံးမွာ ႐ုံးထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ မင္းရာဇာက ႐ုံးခ်ိန္းကို တက္ေရာက္လာရင္းနဲ႔ မတရားမႈေတြ ၾကားမွာ အမွန္တရားဆိုတာ ဘာလဲ မသိေတာ့ေအာင္ စိတ္ဓာတ္က်ေနၿပီလို႔ မီဒီယာေတြကို ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ “ မတရားမႈေတြ ၾကားမွာ အားမရွိေတာ့ပါဘူးဗ်ာ။ စိတ္ဓာတ္လည္း က်တယ္။ တရား႐ုံးေတြ၊ အမႈစစ္ေတြ၊ ရဲ အရာရွိေတြထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အရာအားလုံးကို သိေနတဲ့လူေတြ ေျပာေနတဲ့အရာေတြ၊ ကြၽန္ေတာ့္ကို ကူညီခ်င္တဲ့လူေတြ ဘယ္သူမွ မရွိေတာ့ေလာက္ေအာင္ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေျပာေနတာေတြက တလြဲစီ […]
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပရိသတ်တွေအခိုင်အမာနဲ့အောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိထားပြီး အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာ လျှောက်လှမ်းရပ်တည်နေတဲ့ ဖြူဖြူထွေးကိုတော့ ယောကျ်ားလေး မိန်းကလေးမရွေးအားလုံးက ချစ်ခင်အားပေးကြပါတယ်နော်..။ ရယ်စရာဟာသလေးတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ပျော်ရွှင်စရာလေးတွေဖန်တီးပေးတတ်သလို လှူဒါန်းမှုသဒ္ဓါတရားထက်သန်တဲ့ စိတ်ထားလေးတွေကလည်း မြင်သူတိုင်းကို သဘောကျချစ်ခင်စေပြီး ချစ်စရာအပြုံးလေးတွေနဲ့လည်းအေးချမ်းစေသူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်နော်..။ အပြုံးလှလှလေးတွေနဲ့ အမြဲပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်လေး ဖြူဖြူထွေးဟာ ဒီနေ့လေးမှာတော့ အဖွားဖြစ်သူဆုံးသွားလို့ ရွာပြန်ချင်ပေမယ့်လည်း မပြန်ရတဲ့အကြောင်း စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်ပြောပြလာပါတယ်နော်..။ ကပ်ရောဂါအခြေအနေတွေကြောင့် သွားလာရတာတွေ အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဖွားဆုံးသွားလို့ရွာပြန်ပြီး နောက်ဆုံးအနေနဲ့မျက်နှာလေးကြည့်ချင်တာတောင် ကြည့်ခွင့်မရတဲ့အတွက် ဖြူဖြူထွေးလေးတစ်ယောက် ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်..။ “အဘွားဆုံးပြီး ရွာလေးပြန်ချင်တာကို ဒီမှာ ဆေးစစ်ချက်ထောက်ခံစာတွေပါ ယူခဲ့ ပါ့မယ်ဆိုတာကို ဘာလို့လဲဗျာ။ တော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီး အဘွားမျက်နှာ နောက်ဆုံးနေနဲ့ ကြည့်ခွင့်မရတော့ဘူးလား..” ဆိုပြီး စိတ်မကောင်းစွာ ပြောပြထားပါ..။ ပရိသတ်တွေနဲ့ ခင်မင်ရင်းနှီးကြတဲ့ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေကလည်း မိသားစုနဲ့ထပ်တူ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းလေးတွေနဲ့အတူ ဖြူဖြူထွေးလေးကို အားပေးစကားလေးတွေလည်း […]
သူရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် Show လေးမှာပြသဖို့နောက်ဆုံးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲရဲ့ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာဗီဒီယိုဖိုင်လေး
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဂီတလောကမှာ ချိုသာတဲ့ အသံလေးနဲ့ တေးသီချင်းကောင်းလေးတွေကိုသီဆိုတတ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲ အခိုင်အမာနေရာယူထားတဲ့ အနုပညာရှင်ကတော့ အဆိုတော်မီးမီးခဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော် ။သူမရဲ့တေးသီချင်းတော်တော်များများဟာလည်း တခဲနက်အားပေးဝန်းရံမှုတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေကြား အမြဲရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့ပြီး မိန်းကလေးပရိသတ်တွေအပြင် ယောကျ်ားလေးပရိသတ်တွေကပါ ချစ်ခင်အားပေးကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ် ။ သူကတော့ ရင်သားကင်ဆာ အဆင့်လေးကို ခံစားနေရတာဖြစ်ပြီး စိတ်ဓာတ်မကျပဲ ဘဝကိုအတတ်နိုင်ဆုံးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်သူလေးလည်းဖြစ်ပါတယ် ။အခုမှာတော့ သူမရဲ့ တစ်ကိုယ်တော် show လေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြသသဖို့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုလေးကို ဖော်ပြခဲ့ပါတယ် ။ ဗီဒီယိုလေးကြည့်ပြီး တကယ်ကို စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာအမှန်ပါပဲနော် ။ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်လာသမျှကို လက်ခံပြီး အဆင်သင့်ဖြစ်နေလို့ ကြိုတင်ရိုက်ကူးထားတယ်လို့တောင်ထင်မှတ်ရပြီး မိသားစုနဲ့ ထပ်တူကြေကွဲမိတာအမှန်ပါပဲ ။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် မျှဝေပေးလိုက်ပါရစေနော် ။ Video ကြည့်ရန် Swelsone News
ျမင္သူတိုင္း အခ်စ္ပိုသြားရေလာက္ ေအာင္ ေအးခ်မ္း တဲ့ အျပဳံးေလး ေတြ နဲ႔ ပရိသတ္ ေတြကို ေႂကြ ေစျပန္ တဲ့ ျဖဴျဖဴေထြး ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္
အဆိုတော် ပိုပိုက အဖေမရှိဘဲ မိခင်နဲ့အတူ ချို့တဲ့စွာ ပညာသင်ကြားခဲ့ရတဲ့ ဂုဏ်ထူး(၄)ဘာသာဆုရှင် မမိုးမိုးကို သွားရောက်လှူဒါန်း